Anisan’ny voaresaka tamin’io fihaonana io ny hamelomana lalana roa eto an-drenivohitra mitondra anarana olo-malaza any Inde sy eto amin’izao tontolo izao. Hovelomina indray mantsy ny takelaby famantarana ny lalana Mahatma Ghandi eny Mahamasina sy ny lalana Indira Ghandi eny Tsaralalana. Hovelomina toy izany koa ireo mari-pamantarana amin’ny arabe na “marquage au sol” amin’ireo lalana roa ireo. Tafiditra amin’ny fahatsiarovana ny faha-150 taona nahaterahan’i Mahatma Ghandi izao hetsika izao, ka hotokonana tsy ho ela ireo lalana ireo. Voaresaka nandritra ny fihaonana teo amin’ny ben’ny tanàna sy ny masoivohon’i Inde vaovao ity koa, ny hanaovana tanàna mpirahavavy an’Antananarivo amin’ny tanàna iray any Inde.